नेपालमा अहिलेसम्म कसैलाई कोरोना भेटिएको छैन : निर्देशक डा. झा - Sainokhabar
होमपेज / समाचार / नेपालमा अहिलेसम्म कसैलाई कोरोना भेटिएको छैन : निर्देशक डा. झा
बुधबार, फागुन २१, २०७६ , साइनो खबर
बुधबार राजधानीमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै निर्देशक झाले कोरोनाको परीक्षण थ्रोट स्वाब र नाकबाट पनि लिने गरिएको सुनाइन् । र, उनले कोरोनाको लक्षण बाहिर कुरा आएजस्तै रुघाखोकी र ज्वरा नै भएको सुनाइन् । साक्षात्कारमा बोल्दै उनले यो भाईरसको परीक्षणको लागि लामो प्रक्रिया भएको पनि सुनाईन् । उनले भनिन्, ‘यसको परीक्षण भनेको पिसिआर. हो, हामीले पनि रियल टाईम पि.सि.आर. हेर्ने हो ।’ आफूहरुसँग अहिले चार वटा मेशिन रहेको पनि उले सुनाईन् ।
उनले यो भाइरस हावामा कति दिनसम्म बाँच्न सक्छ ? भनेर अहिलेसम्म आधिकारिक तथ्य बाहिर नआएको पनि स्पष्ट पारिन् । उनले भनिन्, ‘यो विषय अहिले पनि अध्ययनको विषय हो । १०० प्रतिशत रिसर्च भैसकेको छैन् ।’ यद्यपि ९ दिनसम्म पनि बाँच्ने र कसैले २४ देखि ४८ घण्टासम्म पनि बाँच्छ भनेको उनले सुनाइन् ।-रातोपाटी